ब्ल्याक फङ्गसबाट आँखालाई जोगाउने तरिका – Dainik Lumbini
ब्ल्याक फङ्गसबाट आँखालाई जोगाउने तरिका
डा. प्रभात जी.सी.
कोभिड –१९ रोग सार्स–कोभ –२, एक आरएनए भाइरस हालसालै विश्वव्यापी महामारीमा परिणत भएको छ । यो अत्य।धिक सरुवा रोग हो, विशेष गरी बुढाबुढी, मधुमेह, हृदय रोग, दीर्घकालीन श्वास रोग र प्रतिरक्षा क्षमता कम भएका मानिसमा मृत्युदर बढी हुने गरेको पाइयको छ । यद्यपि सामान्य लक्षणहरू र लक्षणहरूमा सामान्यतया ज्वरो, खोकि र श्वासप्रश्वासमा कमी हुन , सामान्य तया आँखा रातो हुनु पनि लक्षणहरू मध्ये एक हो । भाइरस मुख्यतया एक व्यक्तिदेखि अर्को व्यक्तिमा थुकको थोपाहरूमार्फत फैलिन्छ ।
यदि व्यक्तिले संक्रमित व्यक्तिबाट भएको कुनै वस्तु वा सतहलाई छुन्छ त्यसपछि आफ्नो मुख, नाक वा आँखा छुन्छ भने यो फैलिन सक्छ । क्लिनिकल अनुसन्धानहरूले सुझाव दिएका छन् कि भाइरसले आँखामा असर गर्नु का साथै आँखाबाट पनि सर्ने गर्दछ ।
कोभिड –१९ रोग को लागि कुनै निश्चित उपचार छैन, वर्तमान उपचार लक्षणहरुको आधारमा दिइन्छ । अहिले नयाँ देखिएको black fungus ले आँखामा दृष्टि समेत गुमाउन सक्दछ । त्यसैले यो माहामारीको बेलामा आँखा जोगाउन जरुरी देखिन्छ । यस महामारी अवधिमा भाइरल ट्रान्समिशनको जोखिम कम गर्न उचित आँखा हेरचाह आवश्यक छ ।
मुम्बईस्थित आँखा शल्य चिकित्सक डा. अक्षय नायरले बीबीसीलाई बताए कि उनले अप्रिलमा ब्ल्याक फङ्गस का ४० जना बिरामीहरूको उपचार गरे । ती मध्ये ११ जनालाई आँखा निकाल्न प¥यो ।
भारतमा दबिअप ागलनगक को कुल संख्या स्पष्ट छैन, तर मिडिया रिपोर्टले दर्जनौंदेखि सयौं घटनाहरू रेपोर्ट गरी रहेका छन् । मुम्बईको सियोन अस्पतालको नाक, कान, र घाँटी शाखाका प्रमुख डा. रेणुका ब्रैडूले बीबीसीलाई बताएअनुसार त्यहाँका डाक्टरहरूले विगत दुई महिनामा black fungus का २४ वटा घटना देखेका छन् । सामान्यतया, तिनीहरू एक वर्षमा मात्र करिब ६ वटा केसहरू देखिने गर्दछ । ।
कोभिड–१९ महामारीको बेला आँखाको देखभाल कसरी गर्ने ?
रोग सार्ने जोखिमहरूलाई कम गर्नका लागि, आँखाको राम्रो देखभाल गर्नु महत्त्वपूर्ण छ । आँखा हेरचाहको लागि यी निर्देशनहरूलाई पालना गर्नुपर्छ ।
आँखाहरू छुने चिलाउने काम कम गरनु पदर्छ । आँखाको साथसाथै हात, नाक र मुखको रक्षा गर्दा कोरोनाभाइरसको विस्तार कम हुन्छ ।
फोहोर हातहरू भाइरल संक्रमणको स्रोत हो, त्यसैले साबुन पानी वा सेनिटाइटरहरूमार्फत बारम्बार हात धुनु राम्रो हुन्छ ।
मास्कहरू नियमित रूपमा लगाउनुपर्दछ । खोकी वा ह्याँछुउ गर्दा नाक, मुख राम्रोसँग छोपिनु पर्दछ ।,
चश्मा लगाउने र अन्य सुरक्षात्मक उपकरणहरूले सुरक्षाको तह थप्न सक्दछ । यद्यपि सुधारात्मक चश्मा वा सनग्लासले आँखालाई संक्रमितबाट रोक्न मद्दत गर्दछ, ती आँखालाई भाइरल एक्स्पोजरबाट पूर्णरूपमा जोगाउँदैनन् । भाइरस अझै पनि खुला पक्ष, टुप्पो र चश्माको बोटमबाट आँखामा पुग्न सक्छ । पूर्ण अनुहार सुरक्षाको लागि, सुरक्षा गग्गल वा फेस–शील्ड लगाउनु पर्छ ।
सुरक्षित कन्ट्रयाक्ट लेन्स लगाउने र देखभाल गर्ने
यद्यपी रोग नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्र (सीडीसी) र अमेरिकी Optometric संघ (AOA) का अनुसार चस्मा प्रयोग गर्ने र कन्ट्रयाक्ट लेन्स प्रयोगकर्ताहरु मध्ये कोरोनाको संक्रमण बढी हुने कुनै ठोस प्रमाण देखिएको छैन । महामारीको बेला आँखा जोगाउन, contact lens लगाउनेहरूले सुरक्षित लेन्स लगाउने अभ्यास गर्नै पर्छ र राम्रो बानीहरूको हेरचाह गर्नुपर्छ । केवल भाइरल प्रसारण घटाउन मात्र होइन, तर उचित सरसफाइले अन्य सूक्ष्मजीवहरूले गर्दा संक्रामक आँखा रोगहरू पनि रोक्न मद्दत गर्दछ । कन्ट्रयाक्ट लेन्स लगाउनु अघि र हटाउनु अघि कम्तिमा २० सेकेन्डसम्म साबुन र पानीले हात धुनु पर्दछ । हात सफा टिश्यु प्रयोग गरेर सुक्नु पर्छ ।
यदि लक्षणहरू जस्तै ज्वरो, खोकी देखियको अवस्थामा, कन्ट्रयाक्ट लेन्सको ठाउँमा चस्मा लगाउन उचित हुन्छ । लेन्स लगाउँदा प्रायः आँखा छुन्छन्, परिणामस्वरूप रोग सर्ने गोखिम बढ्छ । कोभिड–१९ भाइरसको फैलावट रोक्नको लागि हात सफा गर्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ।
उपयुक्त आँखा सुरक्षात्मक उपकरण छनौट
कोभिड–१९ भाइरसको प्रसारण मोडहरूमध्ये एक दूषित थोपाहरूमार्फत हो जुन आँखामार्फत सिधा शरीर भित्र पस्न सक्छ । चश्माले आंशिक रूपमा संक्रमित थोपाबाट आँखालाई रक्षा गर्छ किनकि भाइरस अझै पनि चश्माको खुला ठाउँबाट आँखामा पुग्न सक्छ ।
पूर्ण सुरक्षा पाउनको लागि, अन्य आँखा र अनुहार सुरक्षा उपकरणको प्रयोग गर्नु पर्दछ । चश्माहरू र फेस सिल्ड प्रायः प्लास्टिकको विभिन्न ग्रेडबाट बनेका हुन्छन् । उचित सुरक्षा उपकरणहरू छनौट गर्दा, सामग्रीको गुणस्तर, सुविधा र पारदर्शितालाई ध्यानमा राख्नु पर्छ ।
बुटवल आँखा उपचार केन्द्र भुड्कीचोक
प्रकृतिको सून्दर देशमा ब्वाँसाहरूको रजाई